Voadika ny 30 Novambra 2012 3:42 GMT
Nisy fiatoana vaovao ny fitsangatsanganana any amin'ny làlana mikintaontaona indrindra ao amin'ny renivohitr'i Porto Rico,San Juan, ka amin'ny aterineto izany. Calle Loíza, any afovoan'ny tanàna manan-tantara any Santurce, dia fifangaroana trano miloko Karibeana maro maha-te honina sy ny manara-damaody. Tanikely mahaleotena ho an'ny mpifindra-monina, izay niveloman'ny fiaraha-monina avy amin'ny Repoblika Dominikàna nandritra ny taona am-polony maro, izy ity dia làlana izay ihaonan'ny fivarotam-boankazo tafo lanitra, lamba tonta, ary toeram-pivarotana kojakoja vaovao maro mangirangirana ho anà bisikileta. Nanomboka nifindra tany amin'ny tanàna manodidina ireo mpanakanto sy tanora manampahaizana tato anatin'ny folo taona farany teo, ka nentiny niaraka taminy ny toeram-pisakafoanana sy kafe tsara haingo. Mba hitehirizana azy rehetra, natsangana ny vohikala Espaniola iray vaovao: